पर्खि एकछिन् कता डोर्याउँछस् कलम
अनि मेरा भावना र कल्पना प्रष्ट सँग
छताछुल्ल,पर्दाफास गर्न अविरल दौडिरहेको
लक्ष्य बिहीन यात्रा कहाँ टुङ्गाउने हो ।
म आफै अन्योल छु ।
सारा जन्ता लाई झुक्याएर नेताको
आँङ र आँतको प्यासलाई मेटाएर पुगेन र तलाई ?
मेरो आँसु र ह्रदयमा भरिएको पिडा र ब्यथालाई
कपिमा रङको होली खेल्न
मेरै घरमा धाउछस् !
जा कलम छिट्टै जा मुत्ति
दे सारा नेपालि लाई
बसिदे नेताको हातमा र
लेखिदे चार अक्षर ।
भरतपुर- 13, गजलकुन्ज, चितवन
Nishan kc December 29, 2011 at 11:10 AM
Nishan kc December 29, 2011 at 11:15 AM
आँङ र आँतको प्यासलाई मेटाएर पुगेन र
khoj talas gara YATRA timi